I-PSG - I-PSG: - I-60%, uNasser Al-Khelaïfi ubeka iNeymar - I-FOOT 01 - Tamban RELAY
I-PSG yonyawo - i-PSG: - I-60%, uNasser Al-Khelaïfi ubeka iNeymar - I-FOOT 01
UFrançois Fillon: lokhu kulimala okungazelelwe kumkakhe uPenelope…
Isihlamba saseRoyal: iBrexit 50p isimboze kanjani uhlamvu lwemali…
ENdiya: Izwe elinentsha eqondisiwe futhi ezimisele ngabantu abasha ngeke…
enyatheliswa NgoLwesibili 10 December 2019 kuya ku-16: 40 Ku: I-PSG.
Ehlobo eledlule, uNeymar ubesenhliziyweni yewindows yokudlulisela nge-serial. Ngempela, i-FC Barcelona yenze konke okusemandleni ukuthola i-mercato, kodwa iklabhu yaseCatalan ikhubekile ekuhlaselweni kukaLeonardo.
Kumele kushiwo ukuthi umqondisi wezemidlalo waseBrazil akazange anikeze siphiwo iqhawe laseSpain isihloko, wafuna isamba semali se300 ME ukuthi athengise uNeymar. Inani eliqinisekisiwe maphakathi nesonto ngu I-Marca, okukhombisa nokho ukuthi isikhundla seParis Saint-Germain sizohluka kakhulu ehlobo elizayo. Futhi ngesizathu esihle, iklabhu lenhloko-dolobha liyazi kahle ukuthi ikusasa layo alisekho ukuthi libhalwe Neymar. Akekho noyedwa ozokwazi ukukhokha isamba esinjengalesi ukuze amqashe. Isizathu sokuthi kungani iParis manje isilungele ukwenza umzamo ngentengo yokuthengisa yomdlali oqeqeshiwe eSantos.
Kusukela manje kuqhubeke, ingqwele ebusayo yaseFrance yayingasazukubanga (kuphela) i-180 ME ukuthi ithengise uNeymar. Intengo encane kakhulu eyethusayo i-FC Barcelona, ​​abaholi bayo uLionel Messi noLuis Suarez abafisa ukubona uNeymar ebuya ezinyangeni ezimbalwa esevele. Ngakolunye uhlangothi, uMarca ugomela ohlelweni lwakhe losuku ukuthi isikhundla sePSG i-vis-a-vis uKylian Mbappé sihluke ngokuphelele njengoba i-Emir yaseQatar ingenanhloso yokuziqhelelanisa neFrance, kungakhathalekile intengo. amakilabhu anentshisekelo azimisele ukukhokha. INeymar noma iMbappé, iParis Saint-Germain ngakhoke inqume. Futhi lokhu kukhetha kubonakala kucacile ...
TELES RELAY 13773 izikhala 0 amazwana
Ama-federal agents asesha indiza kaJuice WRLD ngoNovemba - abantu
Singakwazi ukuqoqa idatha yomuntu siqu ngokuvikela ubumfihlo?
UFrançois Fillon: lokhu kulimala okungazelelwe kumkakhe uPenelope kwavela ngaphambi…
Isihlamba sasebukhosini: iBrexit 50p isimboze kanjani uhlamvu lwemali lwasebusweni olungam- £ 5
ENdiya: Izwe elinabantu abasha abaqondisiwe nabazimisele ngeke baboshwe ngo…
Isikhumulo sezindiza iRoissy-Charles-de-Gaulle: ukubizwa kwezimeya ezingama-62 ukunikela ngezabo…
INdlovukazi uLetsizia yaseSpain iphinda ivusele isiketi esinezimbali kuye…
ENdiya: UVayay Goel kufanele kube nguyena ozothatha izintambo ze-CM eDelhi ye-BJP,…
URoolele uzojabulisa: IPrincess Anne "eyethisayo" yenze ...
Ikholomu kaLaurent Gerra kusuka ngoLwesibili Januwari 14, 2020 -…
I-RTL Morning ye-30 Novemba 2019 - VIDEO
UKlopp: Isheduli yomhlangano we-Prem 'yicala'
AMathiphu: UKUFINYELELA KULULA | SIZA LABO BADINGA
Ukudalwa Kosuku lukaJanuwari 10, 2020 - VIDEO
E-India: I-BJP iya kuCongress for "imibono yobulili" ku-FM |…